Agaasimaha bangiga dhexe ee Israel oo u tajo xoogan ka qaba madaxtinimada IMF – SBC
Agaasimaha bangiga dhexe ee Israel oo u tajo xoogan ka qaba madaxtinimada IMF
Tel Aviv:- sida uu qoray wargeyska New York Times agaasimaha bangiga dhexe ee Israel ninka lagu magcaabo Stanly Fisher ayaa sheegay in uu uga fursad wanaagsan yahay in uu ku guuleysto jagada madaxa sanduuqa lacagta aduunka wasiirka maaliyadda dalka Faransiiska haweenayda lagu magcaabo Christian Lagarad ahna musharax ka mid ah musharixiinta u taagan jagadaas.
Wargeyska ayaa tilmaamay in inkastoo fisher uu yahay khabiir dhanka dhaqaalaha islamarkaana uu leeyahay waayo aragnimo dheer balse waxaa la aaminsn yahay in uu yahay midka u nasiibka yar musharixiinta kuguuleysan karta jagadan.
Hadalka agaasimaha bangiga dhexe ee Israel ayaa ku soo beegmaya waqti gaaban kadib markii uu ku dhawaaqay in uu yahay musharax u taagan jagada madaxtinimada sunduuqa lacagta adduunka ama ciddii bedeli lahayd Dominic Strauss Khan oo xilka iskacasilay kadib markii lagu eedeeyey fadeeexad la xiriirta isku day in uu kufsado gabar magaaalada New York.
Sidoo kale fisher ayaa sheegay in uu go’aansaday in uu isu soo taago qabashada xilka markii uu arkay in uu yahay qof bedeli kara madaxii hore maadaama uu horey u ahaan jirey kuxigeenka koowaad ee guddoomiyaha Lacagta adduunka islamarkaana uu xilkaas hayey muddo toddobo sano ah.
Wargeyska ayaa sidoo kale tilmaamay in caqabadaha ka hor iman kara fisher ay tahay in isaga oo dhaafay da’da u go’an qofka qabanaya madaxtinimada sanduuqa lacagta aduunka oo ah 65 jir in uusan ka weynayn halka fisher uu yahay 67 jir, taasi oo u baahan in uu cod oga helo dalalka xubnaha ka ah sanduuqa lacagta adduunka oo tiradoodu tahay 187 dal inta ay socoto codeynta guud.
Sidoo kale caqabada labaad ayaa ah isagoo wata labo dhalasho Israel iyo mareykan iyo iyadoo la filayo in dalalka islaamka ee xubnaha ka ah sunduuqa lacagta adduunka in ay ka hor yimaadaan in Fisher uu qabto xilkaas maadaama uu Yuhuudi yahay.
Dhanka kale wasiirka maaliyadda Israel ninka lagu magcaabo Yuufaal Ishtaynis ayaa sheegay in Israel ay taageerayso musharaxeeda iyadoo og in ay yartahay fursadaha uu ku guuleysan karo.